တိတ်တခိုးအလွမ်းဝေဒနာတွေ ခံစားနေရတဲ့ သန္တာလှိုင် - Cele Connections
တိတ်တခိုးအလွမ်းဝေဒနာတွေ ခံစားနေရတဲ့ သန္တာလှိုင်
သန္တာလှိုင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မော်ဒယ်လောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေဒိတ်ဒိတ်ကြဲရရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုးကျပြေပြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ စူးရှထက်မြတ်တဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့လည်း ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားထားနိုင်သူပါ။ သူမဟာ The Model Academy အစီအစဉ်ရဲ့ အကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သန္တာလှိုင်ရဲ့ပညာရှိပီသတဲ့ အပြုအမူအပြောအဆိုတွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးအားပေးမှုကို ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။
သန္တာလှိုင်ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အိမ်ထောင်ထူထောင်မှုကိုလည်း တချို့သောပရိသတ်တွေက အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အတွေးအခေါ်ကောင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ခံစားချက်ကို ပညာရှိဆန်ဆန်ထိန်းချုပ်နိုင်တာကတော့ သူမရဲ့အရည်အချင်းတစ်ခုပါ။ အခုအခါမှာတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ခံစားချက်တချို့ကို မျှဝေလိုက်တာမို့ ပရိသတ်တွေကို တအံ့တသြဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ “ဒီနေရာလေးမှာထိုင်မိတော့ ဘာကိုလွမ်းမှန်းမသိ လွမ်းနေတဲ့ခံစားချက်လေး .. ရင်ထဲကဖယ်ထုတ်လို့ မရဘူး….. ဒါပေမယ့် ကျွန်မက တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်မနေပါဘူး”…. လို့ ရေးသားခဲ့တာပါ။
မော်ဒယ်မိခင်ကြီးသန္တာလှိုင်တစ်ယောက် ဘာကိုလွမ်းနေလည်းဆိုတာကို ပရိသတ်တွေက အထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း သန္တာလှိုင်ရဲ့ အလွမ်းပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်နော်။
Source – Thandar Hlaing
တိတျတခိုးအလှမျးဝဒေနာတှေ ခံစားနရေတဲ့ သန်တာလှိုငျ
သန်တာလှိုငျဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့မျောဒယျလောကမှာ အောငျမွငျမှုတှဒေိတျဒိတျကွဲရရှိနတေဲ့ မျောဒယျမိခငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အခြိုးကပြွပွေဈတဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့အတူ စူးရှထကျမွတျတဲ့မကျြဝနျးတဈစုံနဲ့လညျး ပရိသတျတှကေို ဖမျးစားထားနိုငျသူပါ။ သူမဟာ The Model Academy အစီအစဉျရဲ့ အကဲဖွတျဒိုငျတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအစီအစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး သန်တာလှိုငျရဲ့ပညာရှိပီသတဲ့ အပွုအမူအပွောအဆိုတှကွေောငျ့လညျး ပရိသတျတှရေဲ့ ခြီးကြူးအားပေးမှုကို ထပျမံရရှိခဲ့ပါတယျ။
သန်တာလှိုငျရဲ့ ဒုတိယအကွိမျမွောကျအိမျထောငျထူထောငျမှုကိုလညျး တခြို့သောပရိသတျတှကေ အပွငျးအထနျဝဖေနျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ အတှေးအချေါကောငျးမြားကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ခံစားခကျြကို ပညာရှိဆနျဆနျထိနျးခြုပျနိုငျတာကတော့ သူမရဲ့အရညျအခငျြးတဈခုပါ။ အခုအခါမှာတော့ သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ခံစားခကျြတခြို့ကို မြှဝလေိုကျတာမို့ ပရိသတျတှကေို တအံ့တသွဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။ “ဒီနရောလေးမှာထိုငျမိတော့ ဘာကိုလှမျးမှနျးမသိ လှမျးနတေဲ့ခံစားခကျြလေး .. ရငျထဲကဖယျထုတျလို့ မရဘူး….. ဒါပမေယျ့ ကြှနျမက တဈယောကျထဲ အထီးကနျြမနပေါဘူး”…. လို့ ရေးသားခဲ့တာပါ။
မျောဒယျမိခငျကွီးသန်တာလှိုငျတဈယောကျ ဘာကိုလှမျးနလေညျးဆိုတာကို ပရိသတျတှကေ အထူးစိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး သန်တာလှိုငျရဲ့ အလှမျးပုံရိပျလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျတယျနျော။
မထငျမှတျထားလောကျအောငျ အပွောငျးလဲကွီး ပွောငျးလဲသှားတဲ့ မကေဗြာ
“အိမ်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပန်းတွေကို ခူးယူပြီး ဘုရားပန်းကပ်ကာ ကုသိုလ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပိုပို”
” ပရိသတ်တွေသာမက အနုပညာရှင်အချို့ကပါ ချီးမွမ်းခဲ့ရတဲ့ထိ အရမ်းကိုစမတ်ကျပြီးလှနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် “
အူတကျအောငျရယျရတဲ့ မငျးမျောကှနျးနဲ့ ခိုငျသငျးကွညျတို့ရဲ့ အမှတျတရအလှဲလေး